मुगुमा भाइरल प्रकोप बढ्दो, एक सातामा दर्जनौँको मृत्यु
मुगु । जाडो अत्यधिक बढेसँगै जिल्लाभर भाइरल ज्वरो बढेको छ भने दर्जनौँको मृत्यु भइसकेको छ ।
जिल्लाका सबैजसो गाउँ बस्तीमा फैलिएको रुघा, खोकी, निमोनिया र भाइरल ज्वरोका कारण बालबालिका र वृद्धवृद्धा प्रभावित भएका छन् । गाउँमा घाम लागेको बेला हरेक घरका छतमा दुई तीन जना सुतेको देखिन्छ, रुघा खोकीले गाउँ निकै प्रभावित बनेको छ छायानाथ रारा नगरपालिका–१ का स्थानीयवासी धनबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो । एक हप्तायता गाउँमा निमोनिया र ज्वरोका कारण पाँच वर्षीय बालक र ७० वर्षीया वृद्धाको मृत्यु भएको उनले बताए ।
त्यस्तै यसै हप्ता छायानाथ रारा नगरपालिका–५ ढुम गाउँकी ७२ वर्षीया लालशोभा बुढाको मृत्यु भएको छ, त्यस्तै वडा नम्बर ७ मा एक वर्षीय बालक र ७० वर्षीय धर्मकला शाहीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ४ भामवाडा गाउँमा एक हप्तायता पाँच जनाको मृत्यु भएको स्थानीयवासी धीरेन्द्र भामले बताए ।
यता खत्याड गाउँपालिकाका सबै गाउँ बस्तीमा रुघा खोकी, निमोनिया र ज्वरोको प्रकोप फैलिएको तथा सबैभन्दा बढी बालबालिका र वृद्धवृद्धा प्रभावित भएको स्थानीयवासी वीर्खबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । रुघा, खोकी र ज्वरोका कारण शुक्रबारसम्म आधा दर्जन बढीको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए ।
दुई सातासम्म बालबालिका र तन्नेरी बिरामी परेर सञ्चो हुने र ५० वर्षभन्दा माथिका दमरोग रक्तचाप कम र बढी भएका महिला पुरुषलाई रोगले बढी च्यापेर धमाधम मृत्यु हुन गरेको छ । गम्था, रिघा, रातापानी, कोटडाँडा, श्रीकोटलगायत बस्तीमा व्यापक भाइरल ज्वरो फैलिएको छ । चिसो बढ्दै जा“दा झन भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् ।
प्याराट्रुपरले लाइभ शोमै पन्च हानेको भिडियो भाइरल भएपछि रिपोर्टरले गरे आत्महत्या !
रुस । एक जना रक्स्याहा प्याराट्रुपर (सैनिक जसलाई प्यारासुटको तालिम दिइएको हुन्छ)ले लाइभ शोमै रिपोर्टिङका क्रममा पन्च हानेका रिपोर्टरले उक्त भिडियो भाइरल बनेपछि आत्महत्या गरेका छन् । रुसको राजधानी मस्कोस्थित रसियन
परेवाजस्तै माछो ! भाइरल बन्दै
चीन । एक जना माछा मार्ने मानिसले फरक खाले माछो समाएका छन् । उक्त माछाको टाउको परेवासँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो रहेको छ । उनले उक्त माछा समाएर फोटो र भिडियो खिचेपछि पुनः
जी७ राष्ट्रका नेताको सम्मेलनमा लिएको यो तस्बिर किन बन्यो भाइरल !
क्यानडा । जर्मन फेडेरल गभर्नमेन्टले एपीलाई उपलब्ध गराएको यो तस्बिरमा जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल (बीच) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई केही भन्दै । दायाँ बसिरहेका ट्रम्प जी७ राष्ट्ररुका नेताको शिखर सम्मेलनका क्रममा
भाइरल ज्वरो के हो ? कस्तो अवस्थामा आउँछ ? यसबाट कसरी बच्ने ?
काठमाडौं । भाइरल ज्वरो मानिसको रगतमा भाइरसको संक्रमण भएपछि आउँछ । यसलाई सिजनल फ्लु पनि भनिन्छ । अझ भनौँ, जब मानिसको शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदै गएपछि मानिसलाई भाइरल ज्वरो